Mbadamba | January 2020
Anyị jikọtara ike ọkọnọ na motherboard
A chọrọ ike iji nye ọkụ eletrik na ụfọdụ n'ime ya. Na mkpokọta, enwere 5 njikọ maka njikọ, nke ọ bụla nwere nọmba dị iche iche nke kọntaktị. N'ọdịiche, ha dị iche na ibe ha, n'ihi ya, ha ga-ejikọta ha na kọntaktị a kapịrị ọnụ. Enwekwu banyere njikọta Otu ọkpọka ike nwere ọkọlọtọ nwere wired 5 dị iche iche.
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na kọmputa ahụ kwadoro na logo nke motherboard
N'otu oge, nsogbu na-emenye ụjọ na egwu nwere ike ime - kọmputa yiri ka a ga-agbanye ya, ma nbudata ahụ na-akwụsị na ngosipụta nke ihuenyo nne motherboard. Taa, anyị ga - agwa gị ihe kpatara nke a na otu esi edozi nsogbu dị otú ahụ. Ihe na-eme na ihe ngwọta nke nsogbu a na-ekpo ọkụ na ntutu ihuenyo Ihe mbụ ị ga-echeta mgbe ị na-eche nsogbu na-eche ihu na ozi nneboard bụ na n'ime ọtụtụ nsogbu, nsogbu ahụ dị na mpụta.
Ghọta mgbanwe nke motherboard si Gigabyte
Ọtụtụ ndị na-emepụta nne na nna, tinyere Gigabyte, weghachite ụdị ndị a ma ama na nyocha dị iche iche. N'isiokwu a, anyị ga-akọwa otu esi akọwa ha. Ihe mere ị ga - eji chọpụta nyochaa na otu esi eme ya Azịza nye ajụjụ nke ihe mere ị ga - eji chọpụta nsụgharị nke motherboard dị mfe.
Enwere ike ịchọta ihe ntanye vidiyo ọzọ ma ọ bụrụ na onye nhazi ahụ enweghị ihe mgbagwoju anya na / ma ọ bụ kọmputa kwesịrị ịrụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi na egwuregwu dị arọ, ndị editọ editọ na nghazi ngwà vidio. A ghaghi icheta na ihe ntaneti vidiyo kwesiri ka o kwe ka o kwe omume na onye ntaneti na onye nhazi.
Lelee ndakọrịta nke RAM na motherboard
Mgbe ị na-ahọrọ RAM mmanya, ị ga-achọ ịma ụdị ụdị ncheta, oge na ikike gị motherboard na-akwado. Ngwá agha RAM niile nke oge a na-enweghị nsogbu ga-agba ọsọ na kọmpụta na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ motherboard ọ bụla, mana ọfụma ha dị ntakịrị, nke ahụ ka RAM ga-arụ ọrụ. Ozi zuru oke Mgbe ịzụrụ nneboard, jide n'aka na ị ga-edebe akwụkwọ niile maka ya, t.
Kedu ihe bụ motherboard
Na motherboard dị na kọmputa ọ bụla ma bụrụ otu n'ime ihe ndị bụ isi. E jikọtara ihe ndị ọzọ dị n'ime na nke mpụga ya, na-eme otu usoro dum. Akụkụ ahụ dị n'elu bụ otu nke ibe na njikọ dị iche iche dị n'otu palette na njikọta.
Ihe mere bọmbụ dị na motherboard bụ ọbara uhie
N'ihe niile nne na nna nwere obere ihe na-egosi maka ọnọdụ ya. N'oge ọrụ nkịtị, ọ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ma ọ bụrụ na njehie ọ bụla ọ na-agbanwe na-acha uhie uhie. Taa, anyị na-enyocha isi ihe kpatara nsogbu nke dị otú ahụ ma kọwaa n'ụzọ zuru ezu ụzọ maka ịmezi ya.
N'agbanyeghị nnukwu mgbasa ozi nke ngwa ngwa, diski ngwa ngwa ka na-agba ọsọ. Ya mere, ndị na-emepụta nneboard ka na-enye nkwado maka draịvụ CD / DVD. Taa, anyị chọrọ ịgwa gị otu esi ejikọ ha na motherboard. Otu esi ejikọ ụgbọala Jikọọ ngwa ikuku dị ka nke a.
Tụgharịa na motherboard na-enweghị bọtịnụ
The motherboard bụ akụkụ kachasị mkpa nke kọmputa ahụ, n'ihi na ọ na-ejikọta na ihe ndị ọzọ nke ngwaike. N'ọnọdụ ụfọdụ, ọ jụrụ ịmalite mgbe ị pịa bọtịnụ ike. Taa, anyị ga-agwa gị otu esi eme ihe dị otú ahụ. Ihe mere na osisi ahụ anaghị agbanwe na otu esi edozi ya Enweghị mmeghachi omume na ike ọkpọ na-ekwu na mbụ banyere nkwụsị ngwaọrụ ma ọ bụ bọtịnụ n'onwe ya ma ọ bụ otu n'ime ihe ndị ahụ.
Na-agbanwe batrị na motherboard
E nwere batrị pụrụ iche na motherboard nke nwere ibu maka ịmebe ntọala BIOS. Batrị a enweghị ike iweghachite ụgwọ ya site na netwọk, ya mere na oge kọmputa na-arụ ọrụ, ọ na-eji nwayọọ nwayọọ wepụ. N'ụzọ dị mma, ọ na-ada ada naanị mgbe afọ 2-6 gasịrị. Ọkwadebe maka nkwadebe Ọ bụrụ na batrị agbapụtala kpamkpam, kọmputa ga-arụ ọrụ, ma àgwà nke mmekọrịta ya na ya ga-adaba budata, t.
Ntuziaka maka dochie capacitors na motherboard
Otu n'ime ihe ndị na-akpatakarị nsogbu nke motherboard bụ ihe mgbapụta kụrụ. Taa, anyị ga-agwa gị otu esi eji dochie ha. Nhazi nke njikere Ihe mbụ ị ga-arịba ama bụ na usoro maka dochie ihe odide bụ ụzọ aghụghọ, nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ usoro ịwa ahụ nke chọrọ nkà na ahụmịhe kwesịrị ekwesị.
Jikọọ panel n'ihu na motherboard
N'ọdị n'ihu nke usoro usoro ahụ bụ bọtịnụ a chọrọ iji gbanye / gbanyụọ / Malitegharịa ekwentị ahụ, draịvụ ike, ihe nrịbama na ụgbọala, ma ọ bụrụ na e mepụtara nke abụọ ahụ site na imewe. Usoro nke ijikọta na frontboard nke usoro usoro bụ usoro iwu.
Kpebie ihe nlereanya nke motherboard
The motherboard bụ isi ihe nke kọmputa. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na akụkụ niile nke usoro usoro ahụ dị na ya. Mgbe dochie nke a ma ọ bụ nke dị n'ime, ọ dị mkpa ịmara njirimara nke motherboard, nke mbụ, ihe nlereanya ya. E nwere ọtụtụ ụzọ isi chọpụta ihe nlereanya nke osisi ahụ: akwụkwọ, nchọpụta anya, mmemme nke atọ na ngwaọrụ Windows.
Kpọtụrụ PWR_FAN na motherboard
N'okwu ndị dị na ijikọta panel n'ihu ma na-agbanye na osisi na-enweghị bọtịnụ, anyị metụrụ okwu nke njikọ njikọ. Taa, anyị chọrọ ikwu maka otu, nke a na-akpọ PWR_FAN. Kedu ụdị kọntaktị na ihe ị jikọọ na ha Ndi ana-akpọ na aha PWR_FAN nwere ike ịchọta na ihe ọ bụla motherboard.
Isi ezighị ezi nke motherboard
Dị ka ihe ọ bụla ọzọ nke kọmpụta ahụ, motherboard dịkwa n'okpuru ọdịda na malfunctions. N'isiokwu dị n'okpuru ebe a, anyị na-atụ aro ka ị mara onwe gị na mmejọ na ụzọ maka mmebi ha. Atụmatụ nke diagnostics motherboard Anyị enweela ihe onwunwe na saịtị anyị nke na-atụle otu esi nwalee arụmọrụ ya.
Anyị na-enyocha motherboard maka arụmọrụ
Na arụmọrụ nke motherboard dabere na kọmputa ahụ ga-arụ ọrụ. PC malfunctions ugboro ugboro nwere ike ịkọwa banyere enweghị ike - ncha anụnụ anụnụ / nwa ọnwụ, mberede na mberede, nsogbu na ịbanye na / ma ọ bụ na-arụ ọrụ na BIOS, nsogbu na ịgbanwuo / gbanyụọ kọmputa. Ọ bụrụ na enyo ọ bụla gbasara enweghị ike nke ọrụ nke motherboard, ọ dị mkpa iji nyochaa arụmọrụ nke akụrụngwa a.
Ihe mgbaàmà kachasị nke batrị nwụrụ anwụ na motherboard
Onye ọ bụla motherboard nwere obere batrị ọ rụrụ, nke bụ ọrụ maka nchekwa CMOS, nke na-echekwa ntọala BIOS na ntọala kọmputa ndị ọzọ. O di nwute, ọtụtụ n'ime batrị ndị a anaghị ebuteghachi, ma mesịa kwụsịrị ịrụ ọrụ. Taa, anyị ga-ekwu maka isi atụmatụ nke batrị nwụrụ anwụ na ngwaọrụ.
Mgbanwe obibi mbadamba
Ọ bụrụ na ekwenyeghị na motherboard ma ọ bụ ihe nkwalite PC zuru ụwa ọnụ ezubere, ị ga-achọ ịgbanwe ya. Mbụ ị ga-achọ ịhọrọ nnọchi kwesịrị ekwesị maka ochie motherboard. Ọ dị mkpa iburu n'uche na akụkụ niile nke kọmputa ahụ dị na ụlọ ọhụrụ ahụ, ma ọ bụghị na ị ga - azụrịrị ihe ọhụrụ (nke mbụ, ọ na - eche banyere ihe nhazi telivishọn, kaadị vidiyo na ngwa nju oyi).
Kọmputa motherboard diagnostic ndu
Anyị nwere ihe onwunwe na saịtị ahụ iji lelee arụmọrụ nke motherboard. ọ bụ n'ozuzu ya, ya mere, n'isiokwu taa, anyị chọrọ ịkọwakwu nkọwa banyere ịchọta nsogbu ndị nwere ike ime na ụlọ. Anyị na-eme nchọpụta nyocha nke ụlọ ọrụ ahụ.Ọ dị mkpa ka ịlele ụlọ ahụ gosipụtara mgbe a na-enyo enyo nke arụrụ ọrụ, ma ndị isi na-edepụtara na isiokwu kwekọrọ na ya, yabụ, anyị agaghị atụle ha; anyị ga-elekwasị anya na usoro nyocha.
Ịhọrọ nneboard maka kọmputa
Iji họrọ motherboard maka kọmputa, ị ga-achọ ụfọdụ ihe ọmụma banyere àgwà ya na nghọta zuru oke nke ihe ị na-atụ anya n'aka kọmputa. Ná mmalite, a na-atụ aro ka ịhọrọ isi ihe - nhazi, kaadị vidiyo, ikpe na ike ọkọnọ, ebe ọ bụ Kaadị ebe nchekwa dị mfe ịhọrọ maka ihe achọrọ nke components ndị a zụrụ.
https://termotools.com ig.termotools.com © Mbadamba 2020